Thwebula WeChat 6.3.28 – Vessoft
Chat, Ukukhulumisana Voice, Ewebhu
WeChat – a software for ukuxhumana lula nabasebenzisi emhlabeni jikelele. WeChat ikuvumela ukuba wabelane umbhalo nezwi imiyalezo, wenze amakholi wevidiyo, share photos, play games njll software iqukethe iqoqo ukumamatheka cool futhi kwenza ukuba thwebula more. WeChat futhi ikuvumela ukuba ugcine amanothi nibuke umlando eningiliziwe zokuxhumana. Isofthiwe kuhlanganisa module eyenza ukuthumela isikhalazo kubasebenzisi ngenxa yezizathu ezihlukahlukene.
Exchange umbhalo nezwi imiyalezo
Amakholi wevidiyo in izinga okusezingeni
Kushintshaniswa izwi short and video imiyalezo
Beka of ukumamatheka cool
Amazwana on WeChat:
WeChat Ahlobene software:
English, Español, Deutsch, Português... ooVoo 3.0.2
Abafundi E-book Isicelo ukulanda futhi ulalele amabhuku alalelwayo. Isofthiwe kuhlanganisa umtapo enkulu izincwadi futhi isekela izindlela ezahlukene ukuze kubuyekezwe yabo.
English, Français, Español, Deutsch... Total Commander 2.62
Amafayela Ithuluzi esikahle for ukwabelana ifayela okusheshayo nge-Wi-Fi. Isofthiwe isekela ukudluliswa kwedatha kwikhompyutha noma amadivaysi eziningi kanyekanye.